Hery Rajaonarimampianina : Izy no safidim-bahoaka -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Izy no safidim-bahoaka
Maro ny fanehoan-kevitra azo teto amin’ny gazety Triatra nandritra iny faran’ny herinandro iny, mikasika ny lahatsoratra nivoaka ny sabotsy lasa teo, izay namaky bantsilana ny fahitan’ny mpanao gazety ny zava-misy amin’izao fotoana. Ho tohin’izany fanehoan-kevitra izany izao lahatsoratra manaraka izao…
Hery Rajaonarimampianina no nametrahan’ny vahoaka fitokisana, lany ho filoham-pirenena tamin’ny alalan’ny fifidianana ny taona 2013, nandray ny fitantanana ny firenena ny taona 2014. Izy araka izany no taratry ny safidim-bahoaka, ary ny RLM Communication dia niasa sy niady ho amin’ny fiarovana izay safidim-bahoaka izay.
Niaraha-nahita fa tao anaty krizy nandritra ny dimy taona ny firenena nanomboka ny taona 2009 nisian’ny fanonganam-panjakana notarihin’i Andry Rajoelina sy ny forongony. Nikatona tamin’i Madagasikara daholo ny varavaran’izao tontolo izao, ary firenena voasazy no nisy nandritra izany fe-potoana izany: niato ny famatsiam-bola avy any ivelany, niato ny AGOA, nihemotra avokoa ireo mpizahatany, sns.
Voaverin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina tao anatin’ny telo taona monja anefa izany fitokisan’izao tontolo izao izany, raha tsy hiresaka afa-tsy ireo fihaonana sy fivoriambe iraisam-pirenena natao teto Madagasikara (frankôfônia, COMESA), toraka izany koa ny tany ivelany tahaka ny CBI tany Parisy sy Afrika Atsimo, ny fiverenan’ny FMI sy ny Banky Iraisam-pirenena ary ireo fiaraha-miasa avy amin’ireo firenena maro toa an’i Sina sy Angletera, sns.
Fotodrafitrasa fototra sy fanapahan-kevitra goavana maro ihany koa no vita sy noraisin’ny filoha nandritra izay fe-potoana nitondrany ny firenena izay: lalana, barazy, herinaratra mandeha amin’ny masoandro, hopitaly, sekoly, tetezana, fampidirana mpampianatra FRAM miisa 40 000 ho lasa mpiasam-panjakana, sns.
Noho izany, ny fiarovana io safidim-bahoaka io no tokony ho laharam-pahamehana voalohany indrindra fa tsy raharahan’antoko na tombontsoa manokan’ny tsirairay. Nivaona tokoa mantsy ny toe-draharaha tato ho ato, tsy ny fiarovana izay safidim-bahoaka izay no nataon’ny sasany ho zava-dehibe, ny mifanohitra amin’izany mihitsy aza no tsapa sy hita. Vitsy tamin’ireo mpanao politika na mpanolotsaina na antoko milaza fa mpomba ny fitondrana, izany hoe, miara-dia amin’ny filoham-pirenena no mba nijoro niaro izany safidim-bahoaka izany, niaro ny filoham-pirenena nanoloana ireny fanenjehana nahazo azy ireny hany ka voatery ny tenany no nandray an-tanana, araka ny efa nambara teto tamin’ny sabotsy. Adinon’ny sasany tao anatin’ny adihevitra fa ny filoha Hery Rajaonarimampianina no taratry ny safidim-bahoaka, lanim-bahoaka tamin’ny alalan’ny fifidianana filoham-pirenena.
Nanambara ampahibemaso ny zava-misy mikasika ny tontolon’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany eto amin’ny firenena ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina, nandritra ny fihaonany tamin’ireo mpandraharaha sy ireo manam-pahefana samihafa izay voakasik’izany, omaly teny Mandrosoa Ivato. Nilaza izy ...Tohiny